‘हु’ का महानिर्देशकले यस्तो पोष्ट गर्दै भने – “नेपालका स्वास्थ्यकर्मी वास्तविक ‘हिरो’ हुन्” – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
‘हु’ का महानिर्देशकले यस्तो पोष्ट गर्दै भने – “नेपालका स्वास्थ्यकर्मी वास्तविक ‘हिरो’ हुन्”
काठमाडौं ।विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) महानिर्देशक डा. टेड्रोस ए’ड्हानोम गेहब्रेयसले मुस्ताङमा स्वा’स्थ्यकर्मीले को’रोनाविरुद्धको खो’प खोला तारिरहेको भिडिओ ट्विट गरेका छन्। उक्त्त भिडिओ ट्’विट गदै टेड्रोसले स्वास्थ्यकर्मीको प्रशंसा गरेका छन्।असार १ गते मुस्ताङको छा’पताङ् खोला बढेपछि स्वास्थ्यकर्मीले पाइपको सहारले ‘भ्याक्सिन क्यारिअर’ ता’रेका थिए।
सामाजिक संजालमा भा’इरल भएको उक्त भिडिओलाई महानिर्देशक टेड्रोसले ट्विट गर्दै स्वास्थ्यकर्मीले यो सा’हसका साथ जीव’नरक्षाका लागि काम गरिरहेको बताएका छन्।तर कतिपय स्था’नमा यी नाय’कहरुले अझै खो’प लगाउन नपाएको उनको गुनासो छ। ‘यति टाढा स्वा’स्थ्यकर्मीहरू जी’वन बचाउन जान्छन्। के यो उ’चित छ। धेरै ठाउँमा यी नायकहरू अझै खोप दिइएन?,’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
हु का निर्देशकले गरेका ट्विटको स्कृन शट जस्ताको तस्तै
यो पनि,,,,“कोरोना संक्रमणमुक्त भएपछि,को कमजोर शरीरलाई कसरी फुर्तिलो बनाउने” “काठमाडौं “२० जेठ । कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त भएपछि शरीर धेरै कमजोर हुन्छ । यो समयमा पौष्टिक आहारको सेवन गर्नुपर्छ । शरीरमा प्रोटीन, भिटामिन र मिनरल्सको मात्रा भरपुर लिनुपर्छ ।”डब्लुएचओ को अनुसार ताजा फलफुल, दाल, गेडागुडी, हरीयो तरकारी, मकै, कोदो, गहुँ, आलु खानुपर्छ । यी खानाले चाडै शरीरमा फुर्ति बढ्छ ।
“भिटामिन सी, डी, मिनरल्स, र जिंक भएको खाना खानुपर्छ । यसले कमजोरी भगाउछ ।हल्का र पौष्टिक खाना खानुहोस् । चिसो र बासी चीजहरू न’खाने । ताजा खानेकुरा मात्र खानुहोस् ।”सिट्रस फलहरू उपभोग गर्नुहोस् यस्मा उच्च प्रोटीन आहार हुने भएकाले कमजोरी हटाउन सहयोग गर्छ ।कोरोनाबाट निको भएपछि बिहानै उठेर दुईटा बदाम, एक मुट्ठी किशमिश र बिहान दुई ओखर खानुपर्दछ। यी चीज सकेसम्म सुख्खा खानु हुँदैन् भिजाएर खानुपर्छ । राती यी बदा’मलाई पा’नीमा भिजाउनुहोस् र बिहान खानुहोस्। यी सबैले शरीरलाई स्वस्थ राख्दछन्।
“रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता सुधार गर्न व्यायाम गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट स्वस्थ भए पछि हल्का व्यायाम गर्नुहोस्, धेरै र गाह्रो व्यायाम गर्नुहुँदैन, बिस्तारै हिड्दै सुरु गर्नुपर्छ ।”बिहान सबेरै उठ्नुहोस् । चाँडै उठ्नु सकियो भने, सकारात्मक महसुस गर्न सकिन्छ । निद्राले तपाईलाई शारीरिक र मानसिक दुबै स्वस्थ राख्दछ । निद्राले तपाईंको शरीरमा फुर्ति बढाउनको लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छ ।
“कोरोना जिते’पछि पनि एउटा मा’स्क लगाउनुहोस् र शारीरिक दुरीको ख्याल राख्नुहोस्।तपाईको अक्सिजन स्तर, रक्तचाप र ज्वरो ठिक भएको एक हप्ता पछाडि पनि जाँच गर्नुहोस्।”यदि तपाई मधुमेह रोगी हुनुहुन्छ भने चिनी परीक्षण दिनमा दुई पटक गर्नुहोस्।आफैलाई हाइड्रेटेड राख्नुहोस्। पिउने पानी बाहेक, कागती पानी र छाता लिनुहोस्।”ग्याजेटहरूको प्रयोग सीमित गर्नुहोस्। तपाईंले यस्तो सयमयमा टिभीमा धेरै समाचार सुन्नुहुन्न, समाचारको प्रभावले डर तपाईंमाथि हावी हुन सक्छ । एजेन्सी
Previous “दिलीप कुमारले संसार छोड्नु,भन्दा एक दिन अघि कसलाई दान दिएका, थिए ९८ करोडको सम्पत्ती ?
Next संसा’रकै धनी गाउँ, जहाँका सबै मा’न्छे करोड’पति छन्!